AH: လုပ်ကြဦးမလား သုဘရာဇာ
သုဘရာဇာ ဆိုလို့ အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။ တရုတ်နိုင်ငံက ဒီအလုပ်ကြော်ငြာမှာတော့ ဒီလို သုဘရာဇာ ရာထူးမျိုးရဖို့ သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။ အမှန်ကတော့ အသုဘတွေမှာ သေဆုံးသူတွေရဲ့ မိသားစုအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးရမှာပါတဲ့။ အလုပ်ခေါ်ပုံလေးကိုကြည့် - လျှောက်ထားလိုသူဟာ အမျိုးသမီးဖြစ်ရမယ်၊ အရပ်ရှည်ရမယ်၊ အသက် ၂၅ နှစ်အောက်။ ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး၊ နောက်ပြီးတော့ ဘွဲ့ရပညာတတ်ဖြစ်ရမယ်၊ တရုတ်လို (Mandrain) လို မွှတ်နေအောင်ပြောတတ်ရပါမယ်တဲ့။ ဒါဆိုရင်တော့ သင်္ချိုင်းမှာ အလုပ်ရပါပြီ။ ဒီအတွက် တစ်နှစ်ကို လစာ ယွမ် ၁ သိန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၈၈၆ ဒေါ်လာ) ရမှာပါ။ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့ တစ်လကို ၁၀ သိန်းကျော် ၀င်ငွေရှိမှာပါ။ ဒီအပြင် အခန်းကောင်းကောင်းလည်း ပေးဦးပါမတဲ့။ အိမ်မှာလည်း စာတွေဘာတွေ ကျက်နိုင်သလို နိုင်ငံခြားကိုလည်း စာသင်ချင်ရင် အခွင့်အလမ်းရှိပါသေးသတဲ့။
အဲ့ဒီကြော်ငြာမှာတော့ အလုပ်ဝင်ခွင့်ရတဲ့ သူတွေဟာ အင်တာဗျူးမဖြေခင် ၁၀ ရက်ကြာ သင်တန်းတက်ရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ကဲ ဘယ်သူများ စိတ်ဝင်စားပါသလဲ ?
Posted by AH at 3/16/2012 01:23:00 PM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် March 16, 2012 at 1:48 PM
ဟိ ၀င်ငွေတော့ ကောင်းသားနော်
စံပယ်ချို March 16, 2012 at 9:58 PM
မောင်သီဟ March 16, 2012 at 11:29 PM
ဘဝပဲပြောင်း သွားလျှောက်ရတော့မလိုလိုး)း)
Anonymous March 17, 2012 at 9:59 PM
နာ တရုတ်စာ သွားသင်လိုက်ဦးမယ်.. :P
mstint March 18, 2012 at 12:50 AM
တစ်နေ့တစ်နေ့ လူသေတွေမြင်နေရတော့ တရားရှုမှတ်နေမိပြီး
နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမြန်နိုင်တယ် မောင်အောင်ထွဋ်ရေး)
အသက်က ၂၅နှစ်ဆိုတော့ နှစ်ပြန်တောင်ကျော်နေပြီကွယ်း))
မဒမ်ကိုး March 19, 2012 at 4:55 PM
ဟန်ကြည် March 19, 2012 at 8:26 PM
အမျိုးသမီး သုဘရာဇာဆိုတော့ အမျိုးသား အဘုဘတွေ အတွက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ကိုအောင်ထွဋ်...အံမယ် သေတာတောင်မှ ရိက္ခာယူချင်သေးသကိုး...ဒါပေမယ့် ဆယ်သိန်းဗျနော မနည်းဘူး....
Anonymous August 10, 2012 at 7:56 AM
US $ 15886= myanmar 1000000 kyat ? stupid....